မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ပြတ်လပ်နေ၊ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် WHO ထံမှ အလှူခံထ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ပြတ်လပ်နေ၊ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် WHO ထံမှ အလှူခံထ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွေးရူး ပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးပြတ်လပ်နေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)မှ အလှူခံထား ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန(သဘာဝဘေးနှင့် ကူးစက်)ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ သန်း ထွန်းအောင်ထံမှ သိရသည်။
ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရဆေးရုံအချို့တွင် ခွေးရူး ပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးပြတ်လပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ် နေပြီး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝယ်ယူရန် ဘတ်ဂျက်ရှိသော်လည်း ကာကွယ်ဆေးမှာ ပြတ်လပ်နေသဖြင့် ဝယ်ယူ၍မရနိုင်သော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ”ပစ္စည်းက လိုသလောက် မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့မတတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကတွေကအဝယ်များတာ။ အချို့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း လှောင်ထားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ တင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု(၁)က ထုတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကတော့ ချက်ပတ်လည်မှာ ထိုးရတဲ့ ဟိုးအရင်တုန်းကဆေးတွေပါ။ သုံးရခက်ခဲပါတယ်”ဟု ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ သန်းထွန်းအောင်က ဒီဇင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် ပြောသည်။
ယင်းအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဝန် ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)သို့ အလှူခံထားပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ခွေးအကိုက်မခံရ အောင် နေထိုင်ခြင်းနှင့် ခွေးကိုက်ခံရပါက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ဆေးပေးခန်းများတွင် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူ ထိုးနှံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကိုအလှူခံထားတယ်။ မကြာခင်ဆေးတွေ ရောက်လာတော့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ခွေးမကိုက်အောင် နေကြဖို့နဲ့ ပုဂ္ဂလိကမှာတော့ရှိတဲ့ အတွက် ဝယ်ယူထိုးနှံနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတို့အစိုးရ ကတော့ ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါ တယ်။ ဆေးတွေရလာရင် အခမဲ့ထပ်မံထိုးပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ခွေးကိုက်ခံရသူများအနေဖြင့် အစိုးရဆေးရုံများသို့ရောက်ရှိလာသောအခါ ကာကွယ်ဆေးမရှိ သဖြင့် ပြင်ပမှဝယ်ယူထိုးနှံနေရကြောင်း သိရသည်။ ”စမ်းချောင်း၊ ကျောင်းကုန်းလမ်းမှာ ခွေးကိုက် ခံရတယ်။ အဲဒီ ခွေးကိုက်တာ ၁၃ဦးလောက်ရှိပြီ။ အနောက်ပိုင်းဆေးရုံမှာသွားထိုးတာ ဆေးမရှိလို့ အပြင်က ဝယ်ထိုးလိုက်ရပါတယ်”ဟု စမ်းချောင်း မြို့နယ်မှ နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါမဖြစ်ပွားရန် ခွေးများပေါက် ဖွားနှုန်းကို တားဆေးများထိုးနှံပေးခြင်းနှင့် ခွေး များကို ခွေးဂေဟာများသို့ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကာကွယ် ဆေးများ ထိုးနှံပေးခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း သိရသည်။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါရသူများသည် ခွေးရူးပြန် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ခွေး၊ ကြောင်အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်များအကိုက်ခံရ၊ အကုတ်ခံရသောကြောင့် ကူးစက်ခံရခြင်းဖြစ်ကာ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ အနာမှနာခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရေကြောက်ခြင်း၊ ရေနှင့် အစာမျိုရခက်ခဲခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ သွားရည်တစီစီ ကျခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ ခွေးကိုက်ခံရပါက ဒဏ်ရာအား ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့်အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ဆေးခြင်း၊ အနာအားပိုးသတ်ဆေးရည်ထည့်ခြင်း၊ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း နှင့် လက်ချောင်းထိပ်တို့တွင် အကိုက်ခံရပါက အရေး ပေါ်ချက်ချင်းကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျန်း မာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် လက်ကမ်းစာစောင်များအရ သိရသည်။
အစေ့ထုတ် ပြောင်းစိုက်ခင်းအချို့၌ ငမြှောင်တောင်ပိုး ကျရောက်နေသဖြင့် မီးထောင်ချောက်ထွန်း က?
အလောင်းတော် ကဿပ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်နှင့် လမ်းဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်
ဟမ်ဇာဘင်လာဒင်၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ဆော်ဒီအာရေဗီးယား အစိုးရက ရုပ်သိမ်းထားကြောင်း ကြေညာ
တရုတ် အိုလံပစ် အသင်းနည်းပြ အဖြစ် ဟစ်ဒင့် ခန့်အပ်ခံရ
သင်္ကြန်ကာလအပြီး ကားဈေး အတက်အကျ မရှိနိုင်
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ငါးဦး စင်ပေါ်တက်ကာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေ
ဟာဝိုင်ယီ ကမ်းလွန်တွင် စစ်လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျ၊ လေယာဉ်မှူး ဒဏ်ရာပြင်းထန်